राजनीति – Page 56 – गाउँपालिका
टिप्पणी : राणा–थापा मिलनको साइडइफेक्ट : प्रचण्डलाई राहत, ओलीलाई छटपटी
काठमाडौँ – बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणका लागि भन्दै विपरित मुद्दा बोकेका तर एकै पृष्ठभूमिका दुई पार्टी (राप्रपा नेपाल र राप्रपा) को एकीकरण घोषणासभामा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले तीन महत्वपूर्ण सन्देश दिए । पहिलो, दुई पार्टीको एकतापछि बनेको एकीकृत राप्रपा पार्टी बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बन्नेछ र यसका लागि जग बसिसकेको थापाको संकेत थियो । जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतासँगै राजनीतिक बहिस्करणमा परेको...
संशोधन प्रस्ताव ल्याए विरोधमा उत्रिने एमालेको चेतावनी
काठमाडौं ७ मंसिर । संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक वादविवादमै टुंगिएको छ। सोमबार साँझ बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव नल्याउन सुझाव दिएको छ। सत्तापक्षले एकतर्फी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेमा सदन र सडकमा विरोध गर्ने चेतावनी एमालेले दिएको छ। बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधान...
नयाँ शक्तिबाट मुमाराम खनाल जिम्मेवारी मुक्त
काठमाडौँ – नयाँ शक्ति नेपालले पार्टीको राजनीतिक संवाद समितिका संयोजक मुमाराम खनाललाई सो जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको आज बसेको कार्यसमितिको बैठकले खनालका विषयमा अनुशासन आयोगको छानबिन प्रक्रिया चलिरहेका अवस्थामा तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको जनाइएको छ । उनलाई पार्टीको विधानविरुद्ध काम गरेको आरोप लागेको छ । पार्टी प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाका अनुसार केन्द्रीय कार्यकारी स...
नयाँ शक्तिको बैठक ६ कार्ययोजनामा केन्द्रित
सोमबार, मंसिर ०६, २०७३
काठमाडौं ६ मंसिर । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सोमबारदेखि सुरु भएको छ। ललितपुरको धोबिघाटस्थित सिद्धार्थ कटेजमा सुरु भएको बैठकमा विभिन्न ६ वटा कार्यदलले तयार पारेको कार्ययोजनाका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने पार्टी प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिए। गत कात्तिक ३ गते बसेको पार्टीको विशेष राजनीतिक समितिको बैठकले पार्टीको आगामी योजना, संगठन निर्माण, आर्थिक स्रोत परिचालन लगा...
यसरी भयो दुई राप्रपाको एकता
काठमाडौं ६ मंसिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबीच पार्टी एकता भएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा भएको एकता घोषणा सभामा दुई पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणा र कमल थापाले एकता दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरे। एकतापछि नयाँ पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)) भएको छ भने राप्रपा नेपालले प्रयोग गरेको झण्डालाई राप्रपाको झण्डा बनाउने सहमति भएको छ...
दुई राप्रपा आज एक हुदै
काठमाडौं ६ मंसिर । पशुपति शम्सेर राणाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र कमल थापाको नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल बीच सोमबार पार्टी एकता घोषणा हुँदै छ । राजधानीको प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा साढे १२ बजेपछि एक कार्यक्रमकाबीच दुई राप्रपा एक भएको घोषणा हुन लागेको हो । एकीकृत पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहने र दुईजना अध्यक्ष हुने अन्तरिम विधान पारित भइसकेको छ । आज पार्टी एकीकरण ...
सांसदहरुले मासिक तलब भत्तामा भारी बृद्धि
काठमाडौं ५ मंसिर। सांसदहरुले मासिक तलब भत्ता एक लाखभन्दा बढी पाउने भएका छन् । सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ भने दैनिक बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रस्तावित दैनिक पैदल भ्रमण भत्ता भने खारेज भएको छ । ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ व्यवस्थापिका संसदले आइतबार संशोधनसहित बहुमतले पास गरे...
डिनलाई नहटाएसम्म डा. केसीले अनसन नतोड्ने
मंसिर ५ काठमाडौं । आमरण अनसनरत प्रा. डा गोविन्द केसीले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमका डिन डा. केशवप्रसाद सिंहलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । सिंहलाई बर्खास्त नगरेसम्म अनसन नतोड्ने उनले बताए । त्रिविले कात्तिक २८ गते सिंहलाई डिन नियुक्त गरेको थियो । त्यही दिन डा. केसीले अनसन सुरु गरेका थिए । सरकारले डा. केसीको माग सम्बोधनको चरणमा रहेको भन्दै अनसन स्थागित गर्न आग्रह गरेको छ । ...
शान्ति सम्झौताको दुरुपयोग भयो, अब बिद्रोह हुन्छ : विप्लव
काठमाडौँ ५ मंसिर– नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द विप्लवले बिस्तृत शान्ति सम्झौताको दुरुपयोग गरिएको बताएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १० बर्ष पुगेको अवसरमा आज आयोजित विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान र राजनीतिक दिशा विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै उनले शान्ति सम्झौतालाइ जनताको बिरुद्धमा प्रयोग गर्दै प्रतिक्रान्तिको हतियार वनाएर दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएका हुन् । नेपाल...
प्रचण्ड नयाँ राजा भए : मोहन वैद्य
काठमाडौं ५ मंसिर । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नयाँ राजाको संज्ञा दिएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता गलत ढंगले भएकाले देशमा नयाँ-नयाँ राजाको जन्म भएको उनले टिप्पणी गरे । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा वैद्यले भने, ‘शान्ति सम्झौता गलत ढंगले भयो । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रीय सम...